Dib u Milicsiga Dukaamaysiga Fasaxa ee 2013, iyo Waxa Maskaxda lagu hayo 2014 | Martech Zone
Dib u Milicsiga Dukaamaysiga Fasaxa ee 2013, iyo Waxa Maskaxda lagu hayo 2014
Talaado, Janaayo 21, 2014 Kelsey Cox
Kahor intaadan dejinin miisaaniyadaha suuqgeynta ee sanadkan, hubi inaad dib u jaleecdo wixii aan awoodnay inaan ka baranno sanadkii lasoo dhaafay. Fahmitaanka qaar ka mid ah xogta fudud ee laga soo qaatay xilligii wax iibsiga ee 2013 ayaa kaa caawin kara inaad ku wargeliso habka aad ula macaamisho, uguna suuq gayso macaamiisha. Si loo helo waxa caawiyay oo dhaawacay waayo-aragnimada wax iibsiga ee macaamiisha intii lagu jiray xilligii fasaxa ee 2013, Xigasho waxay daraasad ku sameeyeen 1,000 dukaanleyaal ah waxayna ururiyeen xogta ku jirta infographic-ka hoose.
Markay tahay saamaynta dadka wax iibsanaya, 48% macaamiisha ayaa sheegay in qiimeynta iyo dib u eegista ay ahaayeen waxa ku kalifay inay booqdaan dukaan internetka ah, oo ay ku xigto dalacsiin emayl ah oo ah 35% iyo natiijooyinka raadinta google oo ay ku jiraan sawirada wax soo saarka 31%. Toddobaatan iyo shan boqolkiiba dadka la daraaseeyay waxay qiimeeyeen qiimeyn iyo dib u eegis labo ama in kabadan kahor booqashada dukaamada. In kasta oo haweenku ay u badan tahay inay boqolkiiba 145% u soo bandhigaan dallacsiinta iimaylka taleefannadooda casriga ah ee dukaanka dukaamaysiga ah, ragga ayaa 20% u badan inay raadiyaan qiimayaal ka fiican meelo kale ka hor intaanay ka iibsan dukaamada. Sannadkii 2013, adeegsiga barnaamijyada sumadda leh ee dukaanka ayaa kordhay tiro aad u badan oo ah 48%, dukaamada bixiyana khibrada macaamiisha dhijitaalka ah ee ugu habboon uguna habboon waxay u muuqdeen inay helayaan iibka ugu badan.
Akhlaaqda sheekada? Marka alaabada loo suuqgeynayo macaamiisha, waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo digital, gaar ahaan mobilka. Dad badan oo dukaameysanaya ayaa samaynaya cilmi baaristooda waxayna raadinayaan siyaabo ay ku helaan heshiisyo (tilmaan maldahan: email marketing), iyo isbeddelladani waxay sii wadi doontaa oo keliya inay ku koraan aaladaha marin-u-helka ee la heli karo ayaa awooday inay bixiyaan. Marka, kormeer oo hagaaji dib-u-eegistaada, ku dar muuqaalo, adeegso emaylka oo hagaaji barnaamijkaas si aad u hubiso inaad u diyaar garowday guusha 2014.
Tags: macaamiishaDataecommerceEmail MarketinginfographicmarketingSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkatafaariiqda
Jiwire: Xayeysiinta Mobaylka Ku Shaqeysa
Qiyaasta ilaha: Raadso Iibsashada Bakhaarka ee Facebook